Google धरतीमा भौगोलिक निर्देशांकहरूको सूची निर्यात गर्नुहोस्, एक्सेलबाट, छवि र रिच टेक्स्टको साथ - जिओफुमाडास
मार्च, 2012 डाउनलोडहरू, गुगल अर्थ / नक्सा
एक्सेलले गुगल अर्थमा सामग्री कसरी पठाउन सक्छ भन्ने यो उदाहरण हो। केस यो हो:
हामीसँग दशमलव भौगोलिक ढाँचा (ल्याट / लम्बाइ) मा निर्देशा of्हरूको सूची छ। हामी गुगल अर्थमा पठाउन चाहान्छौं, र हामी यो चाहान्छौं कि रूचि पोइन्टको कोड, बोल्डमा टेक्स्ट पाठ, वर्णनात्मक पाठ, पोइन्टको फोटो र इन्टरनेटमा पृष्ठ खोल्नको लागि हाइपरलिंक।
हामी बिन्दुमा क्लिक गर्दा हामी के देखाउन आशा गर्ने उदाहरण हो:
कोड हो: XL-3458
र यो हामी आशा गर्न चाहन्छौं:
श्री जेओक्विन गोमेज पैड्री को घर, जहां राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मा शुरू भएको थियो र अब जो पुरातन विज्ञान को राष्ट्रीय संस्थान द्वारा संरक्षित एक संग्रहालय को रूप मा पुनर्स्थापित गरिएको छ।
इन्टरनेटमा पृष्ठ हेर्नुहोस्
यद्यपि टेम्प्लेट अपलोड गरिनेछ, आलेखको आत्मा यो कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ कि यो कसरी आफ्नै मा गर्न को लागी।
के हामीले कब्जा गर्नु भनेको छुट्टै स्तम्भमा एचटीएमएल ट्यागहरू सिर्जना गर्नु भनेको कन्टेनेट गर्न सक्षम हुनु हो: यसका लागि कोड हुनेछ:
<img src=»http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Casas_actiopan.jpg/800px-Casas_actiopan.jpg»चौडाई =»144»ऊँचाई =»168«>
<a href=»http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casas_actiopan.jpg«>इन्टरनेटमा पृष्ठ हेर्नुहोस्
सबै लेबलहरू जुन यो संकेत गर्न को लागी यो एक अलग लाइन, एक संग बन्द छ जुन इन्टरको बराबर हो।
त्यसो भए, यो टेक्स्ट बोल्डमा रहेको संकेत गर्न लेबल हो, निश्चित रूपमा यसलाईaबाट बन्द गर्दै
im छविको लागि एक लेबल हो, जुन गुणहरू भित्र चौडाई (चौडाई), ऊँचाई (उचाइ) र दिशामा छ जहाँ छवि (src)
अन्तमा त्यहाँ हाइपरलिंकको लागि लेबल छ, जुनसँग खुल्छ
बैजनीमा चिन्ह लगाइएका सामग्रीहरू प्रत्येक छविसँग परिवर्तन हुने सामग्री हो, त्यसैले हामी चासो लिनेछौं र यसलाई कक्षमा छोड्न सक्दछौं।
धेरै फिर्ती बिना, तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि कन्टेन्टनेट फंक्शन यस्तो जस्तै केहि गर्न संक्षेप हुनेछ:
= CONCATENATE(,CELDA,,CELDA,,CELDA,<img src=»,CELDA,»चौडाई =»,CELDA,»ऊंचाई =»,CELDA,«><a href=»,CELDA,«>CELDA,)
यसले देखाउँदछ कि हामीले देखाउन चाहेको सबै डाटा भण्डार गर्न हामी col स्तम्भहरू कब्जा गर्नेछौं। जे होस् लेबलको नाममा ती चिन्हहरू जुन = प्रतीक र डबल उद्धरणहरू प्रयोग गर्दछ, हाम्रो लागि यो जटिल छ किनकि एक्सेलमा पहिलोले प्रकार्य दर्साउँछ र दोस्रो पाठ्य सामग्री अलग गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो ती सामग्रीहरू अलग कक्षहरूमा राखेर समाधान गरिएको छ जस्तो कि उनीहरू पाठ हो।
अन्तमा हामीसँग यो छ:
र Google धरतीमा पठाउन मैले एक बटन राखेको छु जुन फाइल उत्पन्न गर्दछ। त्यहाँ तपाईंले फाइल निर्दिष्ट गर्नुहुने मार्ग निर्दिष्ट गर्दछ र बायाँ प्यानलमा प्रदर्शित हुँदा kml को वर्णन गरेको अपेक्षा।
यो टेम्प्लेटमा केही माउसहरू छन् सेल प्रम्प्टहरूमा डेटा कसरी प्रविष्ट गर्ने भनेर सुझाव दिन्छ। सामान्यतया यसले समस्या हुन सक्छ जब म्याक्रो सक्षम छैन र जब पथ निर्माण भइरहेको छ भने लेख्न योग्य छैन।
त्यहाँ हामीसँग छ, तपाईं गुगल अर्थको साइडबारमा कोड द्वारा खोज गर्न सक्नुहुनेछ, र बिन्दुमा क्लिक गर्नुपर्दछ जुन हामीले अपेक्षा गरेको छौँ।
उदाहरणको लागि किलोमिटर डाउनलोड गर्नुहोस्
यसलाई डाउनलोडका लागि प्रतीकात्मक योगदान आवश्यक छ, जुन तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ पेपाल वा क्रेडिट कार्ड.
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो म्यानिफोल्ड GIS प्रयोग गरी भौगोलिक सूचना प्रणाली
अर्को पोस्ट पानी र नक्सा। comअर्को »
२२ जवाफ "छवि र धनी पाठको साथ एक्सेलबाट गुगल अर्थमा भौगोलिक निर्देशांकहरूको निर्यात सूची" लाई जवाफ दिन्छ।
मैले टेम्प्लेट डाउनलोड गरिसकेको छु, म यसको अध्ययन गर्नेछु र कुनै प्रश्न वा संशोधनहरू लेख्छु। धन्यवाद जी '
हामीले लिङ्क पहिले नै ठीक गरेका छौं।
मैले बैंक स्थानान्तरण मार्फत भुक्तानी गर्न लिङ्क देखिनँ। म एल साल्भाडोर हुँ। धन्यवाद
म टेम्प्लेट खरिद गर्न चाहन्थें तर मेरो जस्तै कार्ड छैन
जाँच गर्नुहोस्, कत्ति सुरक्षित तपाईं पञ्जा उल्टो राख्नुहुन्छ। यो उदाहरण हो:
रूबेन अल्फ्रेडो भन्छिन्:
एक्सेल फाईल डाउनलोड गर्नुहोस्, र मेरो फोटो डी: / obras / alc बाट लोड हुँदैछ फोटोहरू मलाई कठिनाई छ, कृपया मलाई एक विवरण पठाउनुहोस् कि म त्यस ठेगानाबाट फोटाहरू अपलोड गर्न सक्दिन।
के आवश्यक छ कि तस्बिरहरू एक निश्चित आकार छ? वा तपाईं4तस्बिरहरू mb सँग काम गर्न सक्नुहुन्छ
हो, निस्सन्देह तपाईं कम्प्युटर वा नेटवर्कमा स्थानीय मार्गहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ
अनुमानित छ कि पि PC मा स्थानीय रूपमा भण्डारण भएका छविहरू वा सञ्जाल ड्राइवहरू प्रयोग गर्न सम्भव छ। धन्यवाद
के यो URL ले URL को प्रयोग नगरिकन स्थानीय रूपमा तस्बिरहरू बचत गरेको छ?
oscar melendez भन्छिन्:
नमस्ते, मँ तपाईंको टेम्पलेटहरू किन्नमा रुचि राख्छु। म पेरूबाट हुँ, तर जब म बैंक खाता ट्रान्सफर लिंकमा क्लिक गर्छु, मँ तपाईंको पैसा जम्मा गर्न अगस्ट जस्तो केही पाउँदिन।
हामी घटनालाई पछ्याउछौँ, तर हामीले यसलाई पहिले नै समाधान गरेका छौं र भुक्तान प्रणाली पहिले नै सक्षम छ।
म्याक्रोसँग सुरक्षा कुञ्जी छैन, त्यसैले यो परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
डाउनलोडमा स्रोत फाईल वा एक्सेलमा कार्यक्रमको मुख्य म्याक्रो परिमार्जन गर्न सक्षम छ।
यो एक डेटा विफलता होइन, यो Google को छवि विस्थापित छ
DJ Esteban भन्छिन्:
वास्तवमा, मैले Google Earth मा रहेको डेटम WGS84 हो।
के तपाईंले मेरो डेटाको साथ विफलताको कारण पाउनुभयो?
तिनीहरूलाई हेर्न मेलमा पठाउनुहोस्। मलाई एक्सेलमा तालिका पठाउनुहोस् र यसले उत्पन्न गर्ने किमीएल फाइल। editor@geofumadas.com
यदि तपाइँ सम्बन्धित डेटा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, Google अर्थले UTM WGS84 प्रयोग गर्दछ।
समाधान गरेको गतिमा धन्यवाद छ। जहाँसम्म, जब म गुगल अर्थको साथ «किमीएल» फाईल चलाउछु, समन्वय बिन्दुहरू मध्ये कुनै पनि देखा पर्दैन र केही मात्र देखा पर्दछ, लगभग सधैं 1º र शृंखलाको अन्तिम, तर के कुराले धेरै मेल खान्छ (100 किलोमिटर। Pe )। म टेस्ट गर्न र केहि गर्न उकुस छु। के म तपाईंलाई केही ई-मेलमा अपलोड गरिएको डाटाको साथ फाईल पठाउन सक्दछु? त्यसो भए तपाईले के हुन्छ देख्नुहुन्छ। धन्यबाद
त्यो एक ज्ञात समस्या हो, किनभने यो माथि लेखिएको छ।
मार्ग बदल्नुहोस्, तपाईं फाईल सी मा सिर्जित गर्नको लागि राख्दै हुनुहुन्छ: र यसलाई प्राय: विन्डोज सेटिंग्सले अनुमति दिदैन। अर्को मार्ग प्रयोग गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यो अवस्थित छ।
कार्यक्रम मेरो लागि ठूलो देखिन्छ र यसले मलाई खोज्न धेरै खर्च गरेको छ।
मैले2$ को भुक्तानीको विरुद्धमा पाएको छु तर यो थाहा पाउँछु जब म यसलाई कार्यान्वयन गर्दछु भने काम गर्दैन र चेतावनीले यसो भन्छ:
"त्रुटि '75' रन समयमा भयो।
पथ वा फाईल पहुँच गर्दा त्रुटि
यदि तपाईं मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि यो कसरी समाधान गर्न सक्नुहुन्छ वा मलाई जित्न सकेको छ भने अन्य एक्सेल फाईल पठाउन सक्नुहुनेछ, किनकि मलाई भौगोलिक अंकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने काम तयार छ र म धेरै ढिलो छु।
यो विस्थापनमा निर्भर गर्दछ।
यदि तिनीहरू केहि मीटरहरू (10 बाट 15 मिटर) विस्थापित छन् भने यो Google छवि विस्थापित भएको छ भने, तपाईं यसलाई छवि विगतका वर्षहरूमा परिवर्तन देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईंले देख्नुहुनेछ कि जियोरेफरेन्स एकदम खराब छ। जबकि समन्वय सहि छ।
यदि विस्थापन ठूलो छ, यो हुन सक्छ कि तिनीहरू अर्को डाटामको निर्देशांक हुन्। गुगलले WGS84 प्रयोग गर्दछ।
यदि निर्देशांकहरू ग्रहको अर्को क्षेत्रमा खस्छ भने, यो तपाईं अक्षांश र देशान्तर पछाडि प्रवेश गरिरहनुभएको हुन सक्छ। वा तपाइँले चिन्ह प्रयोग गर्दै हुनुहुन्न: पश्चिमी गोलार्धमा देशान्तर नकारात्मक छ, दक्षिणी गोलार्धमा अक्षांश नकरात्मक छ।
एडगर कोरोनाडो भन्छिन्:
धेरै राम्रो योगदान मात्र यो हो कि तपाईं याद गर्नुहुन्छ कि जब मैले मेरो निर्देशांक राख्छु यसले मलाई ठ्याक्कै देखाउँदैन जहाँ यो हुन्छ ... किन तपाईं यो सोच्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ?